I-Turkmenistan Airlines iphucula imigangatho yezokhuseleko neLufthansa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Turkmenistan Airlines iphucula imigangatho yezokhuseleko neLufthansa
Airlines • isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Education • Utyalo mali • iindaba • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba Eziphambili ZaseTurkmenistan
I-Turkmenistan Airlines (TUA) kuphela kweenqwelo moya zeTurkmenistan, nezinze eAshgabat. Isebenza ngeenkonzo zabakhweli basekhaya nakwamanye amazwe ukusukela nge-4 Meyi 1992.
I-TUA izimisele ukuphakamisa intsebenzo yabo emva kobunzima ekwaneliseni iimfuno ezifanelekileyo ze-EASA (i-Arhente yoKhuseleko kuPhapho lwaseYurophu) ekuqaleni kwalo nyaka. Ukusukela ngoko, inqwelo moya ehamba neLufthansa Consulting iphuhlisile kwaye yavumelana ngezicwangciso zokulungisa kwaye sele iqalile ukuziphumeza. Kunye neengcali zokuhamba ngenqwelomoya ezivela eLufthansa Consulting, umqhubi uyaqhubeka ngokusebenza kuzo zombini iinguqu kwinkqubo yolawulo kunye nokuphunyezwa okusebenzayo. Oku kubandakanya ukuphuculwa kweenkqubo eziphambili zolawulo, ngakumbi inkqubo yolawulo loMgangatho yoKhuseleko kunye noMgangatho, uphuhliso lwamaxwebhu kunye nokuphunyezwa kwenkqubo, uqeqesho lwabasebenzi, ukuphunyezwa kwesoftware kunye nokuthengwa kwezixhobo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, lutshintsho kwinkcubeko ngaphakathi kwenkampani.
Njengokuhlaziywa kwintlanganiso yokuqala ngo-Matshi, abaphathi beenqwelo moya zeTurkmenistan bakhatshwa yiLufthansa Consulting ngomhla 29 May 2019 thaca ingxelo yenkqubela phambili yokuphuculwa kwemigangatho yezokhuseleko kwiqela le-EASA lesithathu labaSebenzisi belizwe (TCO), elingumcebisi wezobuchwephesha kwiKomiti yoKhuseleko loMoya ye-EU (ASC).
Ukuhlala unolwazi malunga neenzame eziqhubekayo ze-TUA zokusombulula iziphumo zokuqala kunye nokusebenza kwizicwangciso zokulungisa ezixhaswe yiLufthansa Consulting, i-EASA yamkele intlanganiso yenkqubela phambili elandelayo kwinxalenye yesibini kaJulayi. Njengenyathelo elongezelelekileyo ekufezekiseni ukuthotyelwa, i-airline ivakalise injongo yayo yokuqalisa isicelo esisesikweni sovavanyo olunyanzelekileyo lwesiza yi-EASA kwangoko Agasti 2019.
Iingcali zokhuseleko lwenqwelomoya eLufthansa ziyaqhubeka nokuxhasa i-TUA ekukhokeleni ukumiliselwa kwamanyathelo okuphucula ukhuseleko kunye nokubeka iliso kwinkqubela phambili kwisicwangciso sayo sokusebenza esibanzi, esigubungela phakathi kwezinye ukuphuculwa kweSMS kunye nokujonga idatha yokubhabha, ukulungiswa ngokutsha kweCAMO kunye nenxalenye yecandelo le-145, Ukusebenza komhlaba kunye nemigangatho ekusebenzeni kwendiza ukufezekisa iimfuno zokuthotyelwa kunye nokulungiselela uphicotho lwe-IOSA.
I-airline ihambisa abagibeli abangaphezu kwama-5,000 737 imihla ngemihla ngaphakathi kweli lizwe kunye nabagibeli abaphantse babe zizigidi ezintathu ngonyaka kwiindlela zamanye amazwe nezasekhaya kunye. Izithuthi zineenqwelomoya zanamhlanje zaseNtshona (ezinje ngeBoeing 757, 777, 76) kunye nenqwelomoya ye-IL XNUMX.
umthwalo umphathi utshintsho Komiti ukuthobela kokubonisana nkcubeko mihla le idata ubunzima lwasekhaya iindlela zasekhaya ekuqaleni EASA imizamo izixhobo EU aseYurophu European aviation I-Arhente yoKhuseleko kuLwazi lwaseYurophu Iingcali ziphumo iflegi umphathi weflegi zithuthi imisebenzi yenqwelomoya okulandelayo mhlabeni ukuqaliswa phucula kwaziswa injongo Lufthansa eyona EyoKwindla amanyathelo umhlangano abakhweli abazizigidi mihla esweni Phantse Imisebenzi umqhubi ba sebenzi Ntlangano umgibeli I-Paywall ukwenza Sebenzi iplani cwangciso premium zisiwe inkqubela phambili uphawu umbiko isicelo iimfuno ukusombulula uhlengahlengiso iindlela Safety imigangatho yokhuseleko Isibini isayithi i-SMS isoftwe Imigangatho ukuqala Kuhlala zixhaswe isixokelelwano LobuGcisa uqeqesho update samkela sentshona